Orlistat & Tadalafil mpanamboatra vovo-CMOAPI
Ny vokatra avo lenta dia tsy maintsy hentitra
Ny tranonay dia GMP, cGMP
ISO ： 9001: 2008 voamarina.
Manome sery tokana i CMO & API iray
fahazarana: R&D, famokarana, manamboatra
ing sy ny varotra.
Ny CMOAPI dia afaka manolotra serivisy manaraka ireto, izay tohanan'ny politika matanjaka amin'ny fiarovana ny fananan-tany (IP), ny fiantohana ny fitantanana ireo tetikasa amin'ny fitokiana mafy indrindra.
Ny CMOAPI for Drug Discovery dia vahaolana mifototra amin'ny rahona izay manadihady fahalalana sy angon-drakitra mba hanambarana fifandraisana sy miafina ary manampy amin'ny fampitomboana ny mety hisian'ny fahatapahan'ny siantifika.
Nandritra ny folo taona farany dia nanolotra serivisy fanaingoana sy fanamboarana manokana ny CMOAPI. Ny haavon'ny serivisy ataonay dia afaka miainga avy amin'ny batch kely misy miligram ka hatramin'ny taon-jotra amin'ny serivisy fanamboarana lehibe.
CMOAPI dia mpamatsy fanafody synthétika fitsaboana sy synthous R&D.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED. naorina tamin'ny 2007, dia orinasa orinasa teknolojia tafiditra amin'ny fikarohana, fampandrosoana ary marketing ny akora fanafody. Ny vokatra mianly an'ny orinasa: Lorcaserin, mpanelanelana Lorcaserin, orlistat, Sesamol, tadalafil ary mpanelanelana ny tadalafil, sns. fitaovana, HP setraka 60 HPLC, chromatograpse gazy 20, LCMS, ELSD, «ultraviolet» ary «spectrometre» hita maso, fampangatsiahana sy fitaovana hafa mandroso. Nandalo ny fanamarinana ISO14001, ISO9000 ary DMF tamin'ny alàlan'ny fanakambanana sy ny fahazoana izany, ary manana rafitra fitantanana kalitao tanteraka.
Ny orinasanay dia mampiasa manam-pahaizana zokiolona maromaro miaraka amina fikarohana iraisam-pirenena, ary manana ny tanjaky ny fandalinana laboratoara, ny fitsapana ny mpanamory ary ny famokarana indostrialy. Misy dokotera 11 ary maherin'ny 46 ny tompo, ny mpahay siansa ary ny injeniera ao amin'ny orinasanay. Ny toeram-pamokarana API dia mandrakotra faritra mihoatra ny 40 mu. Ny tobim-panafody GMP dia mandrakotra faritra mihoatra ny 160mu ary manana atrikasa maoderina, laboratoara fitantanana ary tranobe fitadiavana. , efitrano fatoriana, efitrano misavoritaka, sns.
"CMOAPI dia ISO 9001: 2008 voamarina ary ny asany rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitry ny fitantanana ny kalitao iraisam-pirenena."